Thola i-Blow-Out Ponytail enhle kakhulu yoSuku Lwezithandani – SL Raw Virgin Hair LLC.
Usuku Lwezithandani selufikile! Impela wusuku olulodwa lapho imibhangqwana ethandanayo iluthanda ngokuphelele. Njengoba kungase kuzwakale kufushane, lolu wusuku lapho ungazibophezela khona komunye wakho obalulekile, nihambe niphole, nenze into enijabulela ukuyenza nobabili, futhi mhlawumbe aninaso isikhathi senu nobabili nje phakathi nesonto elivamile. .
Kunezinketho ezahlukene zokuthi ungalusebenzisa kanjani uSuku Lwezithandani zakho, kodwa kwabesifazane, izingubo nezinwele kuyizinto ezikhathazayo eziphezulu zokubukeka okuhle kakhulu. Nakuba sizokushiyela izingubo, ake sikusize ngezinwele.
Siqinisekile ukuthi ukwazi kahle ukuduma kokuthi izandiso zezinwele zisembonini yezinwele. Izinhlobonhlobo zezinketho nezinketho abazinikezayo ekwenzeni umuntu abukeke emuhle kakhulu futhi ehlukile zivela ezinhlotsheni zazo ezihlukene eziklanyelwe izidingo ezahlukene. Thina kwa-SL Izinwele Ezingavuthiwe siyaqonda isidingo sokuthuthukisa sonke isitayela sakho sezinwele nendlela osebenza ngayo, yingakho siphakamisa ukuthi uzame le Kinky Blow emnandi kakhulu emnandi kakhulu- umsila we-ponytail. Bona ividiyo
Ngosuku Lwezithandani, ukukhetha kwethu nokugxila kukho izinwele ze-Kinky eziqondile, ezigxile ekutheni ungayithola kanjani i-Blow-out ponytail ephelele. I-ponytail hairstyle iyisinqumo esivame kakhulu futhi esithandwayo kwabesifazane abanezinwele ezinde noma ezimfushane. Njengoba iyasebenza futhi igcina izinwele zikude nobuso, iletha ukubukeka okuhle nokupholishiwe. Uma ukhathele ukubukeka okushelelezi kakhulu, kungani ungazami ukubukeka komsila we-ponytail futhi uhlole okuthile okusha?
Lolu hlobo lokubukeka lungafinyelelwa kalula ngeyodwa ye-Brazilian Kinky Straight Blowout Hair inqwaba Yakhelwe ngokukhethekile ukulingisa ukubukeka kwezinwele zemvelo eziphephethiwe. Futhi iyinketho ephelele ye-ponytail eshayayo. Njengoba kulula kakhulu ukwenza isitayela nokuyinakekela, i-ponytail yakho izobe isilungile kungakapheli imizuzu. Buyisela izinwele zakho zibe imvunulo, zisonga ama-wefts, ngebhulashi elihle, dlula inyanda yakho futhi usulungele ukuhamba. Kufanele ibe bushelelezi lonke ikhanda. Uma iponi iphezulu, lungisa ivolumu nobude ngeminwe yakho, bese u-voila - uneponytail ephumayo.
Lokhu ukubukeka okulula kakhulu ukukuzuza, kanye nezinye izifundo zevidiyo zokuthi "ukwenza kanjani?" hlala ubukele SL Izinwele Eziluhlaza .